Guddoomiyaha KULMIYE Muuse Biixi oo Soo dhaweeyey Go’aanka Madaxweynaha Somaliland ka soo Saaray Doorashada |
Guddoomiyaha KULMIYE Muuse Biixi oo Soo dhaweeyey Go’aanka Madaxweynaha Somaliland ka soo Saaray Doorashada
Gabiley (GNN)- Guddoomiyaha KULMIYE, ahna murrashaxa jagada Madaxweynaha ee xisbiga Md. Muuse Biixi Cabdi, ayaa soo dhaweeyey go’aanka Madaxweynuhu soo saaray ee uu ku kala qaaday labada doorasho ee Madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada.
Guddoomiyaha KULMIYE Md. Muuse Biixi oo waraysi khadka telefoonka ku siiyey laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da caawa, waxa su’aalihii la waydiiyey iyo jawaabihii uu ka bixiyey u dhaceen sidan;
Su’aal: Guddoomiye sideed u aragtaa go’aanka Madaxweynuhu soo saaray ee uu ku kala qaaday labadii doorasho ee Madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada oo inay dhacaan u muddaysnaa 27 March 2017, laakiin u dib u dhigay doorashii Wakiillada?
Su’aal: Madaxweynuhu marar badan wuxuu sheegay in aan maalin loogu darayn xilkiisa, xisbiga WADDANI madaxdiisu markii ay hadleena waxay yidhaahdeen xataa ballanqaadka uu Madaxweynuhu qaaday maanta ee ah inuu doorashada Madaxweynaha xilligeedii ku qabanayo in aanay ku kalsoonayn, maxaa damaanad ah oo aad haysaa adigoo Guddoomiyihii iyo murrashixii KULMIYE ah in doorashada Madaxtooyadu xilligeeda ku dhacdo?
Jawaab: Qadar Ilaahay iyo wax innaga wayn oo ah awood ka baxsan gacanteenna mooyee, laakiin anigu waxaan hubaa xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo Madaxweynahaba inay ka go’antahay doorashada Madaxweynuhu inay maalinteeda ku dhacdo